Warshadda Birta - Shiinaha Soosaarayaasha Alaabada Birta, Alaab-qeybiyeyaal
Xayndaab qaloocsan oo saddex-geesood ah
Welded Mesh Fence waa nooc dhaqaale oo nidaamka xayndaabka ah, oo laga dhisay guddi xayndaab mesh leh oo leh qaabab dhaadheer oo sameeya xayndaab adag. Xayndaabka xayndaabka waxaa lagu dhejiyay silig bir ah oo kaarboon ah oo tayo sare leh, dusha sare ee lagu daaweeyo walxaha buufinta budada ah ee loo yaqaan 'electrostatic polyester spray'. Ka dib ku xir guddiga xayndaabka boostada adoo adeegsanaya boodhadh ku habboon. Sababtoo ah qaabkeeda fudud, rakibidda fudud iyo muuqaalka quruxda badan, macaamiil aad iyo aad u tiro badan ayaa tixgeliya xayndaabka mesh ee la isku qurxiyo sida xayndaabka difaaca guud ee la doorbido.
Qafis eyga Australia
Baqashada eyga waxaa loogu talagalay 1.2 * 1.8 ama 1.5 * 1.8m. Macaamiilku wuxuu isugu soo ururin karaa dalab ahaan.
Qafiskii eyga, ma uusan sameynin qafis, laakiin wuxuu ahaa guri loogu talogalay eeyga, eeyga ayaa ku yeelan kara boos ballaaran.
Cabirka digaagga, ku soo dhawow macmiilka loo habeeyay, waxaanan ku siin karnaa sida dalabkaaga.
Qafis waa la galvanized oo waxaan u isticmaalnay mesh silig welded in la sameeyo. Waxay kahortagi kartaa qafiska ama eey ka soo baxa qafiska, maxaa intaas ka badan, waxay ka ilaalin kartaa dadka inay amaan ahaadaan.
Codsiga: Wuu jari karaa birta kaarboon, birta birta ah, naxaasta, aluminium iyo tubooyinka kale iyo astaamaha, sida: tuubada, tuubada, tuubada oval, tuubada qaabaysan, H-beam, I-beam, xagal, kanaal, iwm. si ballaaran ayaa loogu isticmaalay noocyo kala duwan oo dhuumaha wax lagu baro, warshadaha dhismaha, qaab dhismeedka shabakadda, birta, injineernimada badda, dhuumaha saliidda iyo warshadaha kale. Badeecadaha Hordhac: Xayndaabka noocan ah waxaa lagu sameeyaa mesh silig ah iyo tuubada birta ah. Xayndaabka, way fududahay i ...